Home Diinta Wararka News In Englsih Suugaan Multmedia Sports News Contact Us TARRIIKHDII CARAYS CIISE KAARSHEViews: 9465
Mon, Apr, 20-2009
Sida la wariyay Careys wuxuu ahaa Wiilkii seddaxaad oo uu dhalay Ciise Kaarshe, wuxuuna ku barbaaray Miyiga Kismaayo, noloshiisuna waxba kama duwaneyn tan uu ku nool yahay ninka reer guuraaga ah ee Soomaaliyeed. Careys Ciise wuxuu ahaa xoola raac si walba ula qeybsaday dhib iyo dheefba beesha uu la noolaa. Intaa waxaa u wehelisay in uu Quraanka Kariimka ah si fiican u yaqiin maadaama uu ahaa dhal wadaad. Sida dhaqankeena ku xusan, dhalinta reer miyiga ah markii xoolaha ay soo xera-geliyaan oo ay ka nastaan hawl-maalmeedkii shiddada iyo qaxarka badnaa, waxay naftooda ku madadaalin jireen amaba ku caweysimi jireen ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka aanu u leenahay, si dhibtii faraha badnayd ay isku ilawsiiyaan, Labadii haasaawe u dhexeeyeyna ay halkaa ku kulmi jireen. Ciyaaraha Hiddaha iyo dhaqanka oo noocyo badan ah degmo walbana ay leedahay ciyaar u gaar ah, ayaa ahaa isha madaddaalo ee dhallinta ku nool miyiga Soomaaliyeed. Abwaannada ku nool degmadaasna sina ugama qataneyn in ay ka soo qayb galaan Cawaysyadaas, kana muujiyaan suugaantii ay barbaartu uga baratay. Waxaa la rumeysan yahay in Careys Ciise uu ka mid ahaa dhallintii ku doobo dilaacsatay Caweysyada noocaas ah asagoo sanadkii Labaatanaad ku jira. Ciyaarta Saarka loo yaqaano oo laga ciyaari jiray Miyiga Kismaayo isuguna dhafan Shanqadh Jaameed , Sacab iyo mid tixeed ayaa alle Naxariistii Janaad ha ka waraabiyee Careys Ciise uu ku soo barbaaray kuna soo caan baxay. Taasi Careys waxay dhaxalsiisay in uu dhallinta beeshiisa ka kasbado xurmo iyo sharaf iyo aqoonsi madadaaleyinimo. Careys dulucda ama ujeeddada saarkiisu waxuu u biya shubaneysay Haasaawe Dumar , Madadaalo iyo Maadeys IWM. Tixdiisu ma ahayn mid aad u dhaadheer sida kuwii danbe, waayo waxaa ka soo dhex geli jiray kana dhabqinayay Ciyaarihii qoobka iyo Jaanta oo lagu dhafayay Saarka. Sida laga hayo Caasha Ciise Kaarshe oo ahayd Walaashii ka weyn , waxay sheegtay in Careys Ciise tixihii ugu horeeyey ka tiriyay Fagaaro ciyaaro dhaqan lagu hayey oo loogu damaashaadayay Aroos cusbaa oo goor habeen ah degmadii uu ku noolaa ka dhex dhacay. Sida dhallin iyo caadadeed ah, Ciyaartii oo jaanta loo hayo ayaa ciyaartii dhexdeeda waxaa ku kaftamay Cabdi Maxamed oo careys saaxiibkiis ahaa iyo nin la oran jiray Xassan Xuseen oo degsiimada miyigaas Kismaayo ka mid ahaa. Qoyska Xassan uu ka soo jeeday wuxuu ahaa Geelley, kan Cabdi Maxamed se wuxuu ahaa Lo'ley. Cabdi oo u duurxulaya Xassan ayaa Ciyaartii ku soo booday oo ku xifaaltamay sidan : Anoo teesada fadhiya Sacuhu laba tiro yihiin Talaatiin dhays yihiin Eeggaas Toban dhaleyn Tuug halo la joogaa Tacliin ima taaran karo Xassan Xuseen in la duray oo uu Cabdi Maxamed Daandaansi wado markii uu arkay ayuu si kalsooni leh tix diisii u soo ritay wuxuuna yiri sidatan : Qarbaab weyn iguma taal Kaneecadu ima qacdhabin Ma qabo qaalmaha Lo'aad Ee waxaan ahay qooq Horaad Kaftankii Tixeed wuxuu sii socdaba Waxaa dooddii laga badiyay Cabdi Maxamed. Careys Ciise oo ahaa saaxiibkii Cabdi Maxamed ayaa dhibsaday markii uu arkay loollankii Xifaaltanka in laga sito Saaxiibkiis. Careys wuxuu la faqay Cabdi Maxamed, wuxuuna ka codsaday inuu isaga u daayo kaftanka kaalintiisa. Cabdi kama uusan diidin oo wuu ku raacay.
Careys Ciise iyo Xassan Xuseen ayey doodii noqotay. Careys waa markii ugu horeysay oo tix Xassan Xuseen ka dhan ah uu Ciyaartii ka siidaayey. Aad iyo Aad ayey labadoodii uga dhanaanaatay, xifaaltankiina wuxuu isku badalay cay aan cadaawonimo ka danbeynin. Loollankii tixeed ee dhexmaray Careys iyo Xassan in kastuu habeen kaas bilaawday in mudda ah ayuu socday habeen walbana waxay dhalinta u camiri jireen caweysin Ciyaareed.
Caydooda iyo xifaaltankooda malahayn wax naxli iyo cadaawad reebta, mar alaale marki ay caweyska ka tagaan habeenkii, xiriirkooda kale wuxuu ahaa mid aad u wanaagsan oon saaxiibnimo ka madhnayn. Balse markaad u fiirsatid tixaha ay isku tuurayaan , waxaad moodaa inayan waxba isula harin. Tusaale ahaan bal aan u soo qaato tixaha jajabka ah ee ay usweydaar sanayeen . Xasan Xuseen Baa Careys Ciise Ku yiri sidatan : Foolxumo Careys iyo Koley ina foolac tahay Wax baa soo faalalaayee Intayan naga xadin furmaha Armaad naga fiirisaan. Careys Ciise baa isna soo ritay Tixdiisii wuxuuna yiri sidatan : Xassan Cumar iyo Xuseen Waa waxaan lagu dhalin xalaal Xaaraan kama xaajo laha Xoolaha xoog kuma helaan Ximaarkoo Carab u xiran Inay xalaytaba xadeen Xogteedaan haatan helay Ee xarkaha yey idinka xadin. Careys Ciise wuxuu ka mid ahaa dadka ku burura saarka marka la tumayo jaceylka ay u qabaan awgeed. Lama sheegin Careys Ciise oo ka qaday Caweys Ciyaareed oo beeshiisa lagu qabtay. Dhallintu waxay u kala soo hormari jireen fagaaraha uu careys ka muuqdo. Wuxuu ahaa Abwaanka keliya ah oo ay beeshiisu ku qanacsan tahay oogana Caweyska ay dhallintu ku kulanto. Bal si fiican ugu fiirso tixdan oo ka mid ahayd tixihii uu ka soo jeedin jiray Goobaha Caweyska isagoo dookhiisa cabirayo dumarka uu jecel yahay nooca ay yihiin. Careys Ciise wuxuu yiri Sidatan : Marhadday fuursan tahay Feeruhu ay kala fideen Faraasilad Naasku yahay Awowgey fiqi Idiris iyo Faxanaheygaan ka galay War ka faanaye miyey ifilan Mar haddey dhuuban tahay Madaxu uu dhiisha yahay Dhudhun Naasuhu yihiin Awowgey Madax caddiyo Makaahiil baan ka galay War diidaye miyey i dili. Middaan dheereyn oo dhinneyn Dhexdiyo dhabarka u yareyn Dharkiyo dhogorteeda kale Dhalaaleynino dhaqneyn Dheelkeed ma'aan rabee Intaan dhimirkey la gelin Dhusuqley iga dhaqaaq. Careys Ciise in kasta uu ahaa hal abuur fagaaro caweyska ku doob-dillaacsaday, hadana wuxuu ka dhashay qoys dhanka diinta ku xeel dheer, oo aabihiis Ciise Kaarshe ma uusan jecleyn Careys in uu saar yahanimo u beydho. Ciise Kaarshe fanku wuxuu ugu muuqday fal sheydaan oo lagu baadiyoobo, oo ruuxii shaqa ka dhigtaa uu yahay mid diintii iyo waddada toosan ee toobiyaha ah ka marin habaabay. Si kastaba arrinku ha u dhacee Careys Ciise wuxuu noqday Saaryahan weyn oo looga haybeesto badweynta saarka, wuxuuna noqday Af-maal dhanka saarka aan tartame kale yeelan. Kuma khaldanin haddii aanu Careys Ciise ku Magacawno " Aabihii Saarka". Faana kama ahayn tixaha qaar kood uu ku sheegayo in aan ruux la tartama.
dhanka saarka uu san jirin. taasina ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogto ayaa uga markhaati ah in asaga oo kale wali ka soo shaac bixin ummaddeena. Bal si fiican u dhuux Murtida saarkan soo socda oo uu Careys Af-tahan nimadiisa wax uga sheegayo : Af goortuu xaalku yahay Itaalkey baan ordaa Irdaha waan kala aqaan Ma aan ihi aamanuu Albaabka aw-barriyo Iiraan iyo Aalta iyo Afgooyiyi Aadan yabaal Intii alif saar taqaan Aney igu Aamineyn. Tix kalena Careys Ciise isaga oo muujinaya in saarka looga haray deegaankiisa oo dhan, wuxuu yiri sidatan: Waamadaan aan Fadhiyo Lawaa nin i waabiyaa Anay waysada ii wadaan Tan iyo weyteen Absame Wadaaddada wadal mogga ah Warsangeligaa wal waal Waabbeeneeyaba warsada. Careys Ciise Af-maal nimada ka sakow wuxuu ahaa nin Wadani ah oo mar kasta jecel bulshaweynta Soomaaliyeed in uu waajibka saaran ee Qaranimo ku booriyo, ugana digo wax kasta oo uu isleeyahay waa qalad. Careys Ciise wuxuu Fanaaniinta Waabari ku soo biiray amaba ka mid noqday lixdameeyadii markii labada gobol ee Soomaaliyeed Midoobeen. Careys wuxuu ka mid noqday Kooxda Waabari markii uu wacdaro layaab leh ee Suugaaneed uu ka muujiyay Munaasibaad lagu xusayay isku darkii labada gobol Waqooyi iyo Koonfur, Xafladaasoo lagu Maamusayey israaca Labada Gobol laguna qabtay Gobolka Jubbada Hoose Magaalamadaxdiisa Kismaayo. Xafladaas waxaa ka soo qeeb galay Wariirka Gaashaandhiga iyo Wasiirka Warfaafinta, Ujeeddada waftigana waxay ahayd inay kala qayb galaan.
dadweynaha ku nool Gobolka Jubbada Hoose, fantasiyaha damaashaadka maalinta kowda Luuliyo. Waftigii waxaa lagu soo dhaweeyay Careys Ciise iyo koox dumar ah oo isaga wehelisay, watana dharkii Hiddaha iyo dhaqanka aanu u lahayn. Careys Ciise fagaarahaas wacdaro aan la soo koobi kareyn ayuu ka muujiyay, wuxuuna tiriyay saar ku saabsan Munaasibada kowda Luuliyo. Waxaa kale oo uu halkaa ka tiriyay Saar ku saabsan waxa uu Ingiriisku u hortaagan yahay xornimada N.F.D. wuxuuna yiri sidatan : Afrika iyo Eeshiya Iyo orobaba dhamaan Iyaguba way noo ordaye Maxaad Ingiriis adigu Albaabka u taagan tahay Eed Soomaalida u adyadeyn. Careys Ciise dhammaan tixihii saarka ahaa oo uu halkaa ka soo jeediyay dadku aad iyo aad ayey ugu riyaaqeen, wuxuuna halkaa ku mutaystay in la siiyo Billad sharaf, waxaana loo sheegay in loo qaatay shaqaalaha wasaaradda warfaafinta si uu Raadiyaha Muqdishaw Ummadda Soomaaliyeed ugu soo tabiyo Maansadiisii saarka ahayd. Naxariistii Jano illaah ha ka waraabiyee Careys Ciise wuxuu ahaa ruux af-gaaban, waxse balaarneyd xigmaddiisa maanseed ee Eebbe ku manaystay, mana ahayn dadka wax ku allifa qoraalka, ee wuxuu ahaa dadka aan u fikirin maansada oo markii uu doonaba soo gaddiyo xigmadda maskaxdiisa ka buuxdo. Careys Ciise wuxuu ahaa nin aad u nadaafa jecel had iyo goorna wuxuu xiran jiray oo u caada ahayd Macawis, Shaar gacma dheer ah, kabaha nooca loo yaqaano sandalka, Koofiyad, Cimaamad uu garabka saarto iyo ul xardhan oo aad u quruxsan. Illaahay ha u naxariistee wuxuu ahaa nin aad u deggan oo iimaan wanaagsan, hammigiisuna wuxuu ahaa Qaranimo, waddaninimi iyo Hagaajin dhaqan. aad iyo aad wuxuu u aaminsanaa shaqadu in ay tahay xaq, la'aanteedna in bulshadu horumar aysan gaari karin. Careys Ciise Kaarshe wuxuu ka mid ahaa kooxdii lixaad ee Hobolada waabari oo gashay Dugsiga Tababarka Xalane 1972dii, halkaas oo lagu barayay Tababarka Ciidamada iyo Maamulka Shaqada.
Careys inkastuu ahaa nin waayeel ah, haddana niyadiisu aad iyo aad ayey uga wanaagsaneed kan dhallinyarada, wuuna ka firfircoonaa mar kastana wuxuu jeclaa in uu ilaaliyo Magaca kooxdiisa Waabari. Careys Ciise Maalin Maalmaha ka mid ahayd isaga oo gudanaaya shaqadiisii tababarka ahayd, ayaa wadna-xanuun ku soo booday. Maalintaas taariikhdu waxay ahayd 6-6-1972dii Maalin Arbaca ah, waxaana isla markii loola cararay Isbitaalka Xoogga, halkaas oo uu ku nafwaayay 6-8-1972dii. Careys Geeridiisii Ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogto aad ayey uga murugoodeen, xabaashiisiina si fiican oo sharaf iyo xurmad mudan ayaa loo qabanqaabiyay, loogana soo qeyb galay. Careys wuxuu ifka kaga tagay qoys ka kooban lix qof. shan caruur oo isugu jirta Afar wiil iyo Gabar, iyo Hooyadood. Careys Ciise in kasta oo uu dhintay, maantana nala joogin oo noo muuqan, haddana Taariikhda Suugaaneed ee Ummadda Soomaaliyeed marnaba lagama yaabo in ay hilmaanto kaalinta lama ilaawaanka ah ee uu ka galay. Taasaana keentay in lagu xuso Qoraal kasta oo laga qoro Suugaanta Soomaaliyeed. Thank you for visiting our web page
Meherkii Ubah Mohamud Kaarshe iyo Liben Ali Hussein Falaage Ugaas Cumar Geele oo tacsi u diraya Dhaman Umada somaliyed Geeridi ku timi Suldaan Ciise Xassan Cumar Cali
Xildh Sacdiya Carays oo kullan Casho Sharaf iyo soo dhawayn ay u sameeyey BYD-Bosaso (Daawo Sawiro)
Xildhimaanad Sacdiya Carays oo si diiran loogu soo dhaweeyey Degmada Burtinle
War bixin ku saabsan socdaalkii Xildhibaanad Sacdiya Carays ay ku martay Gobollada Puntland.
Wasiirka duulista hawada ee Puntland oo Qado sharaf u sameeyey Xildhimaanad Sacdiya Carays (Daawo Sawiro )
Xildhibanad Sacdiya Carays ayaa lagu soo dhawayey Magalada Garowe (Daawo Sawiro )
Wafti ay hogaaminayso Xildh. Sacdiya Carays oo booqday Gacma Fale (Daawo)
Taariikh nololeedka Xildhimaanada Qaranka Marwo. Sacdiya Carays Ciise Guurka iyo Faa'iidada uu uleeyahay ummada Islaamka Views: 87803
10-ka kooxood ee sports aduunka ugu qanisan.. Views: 55592
Talo bixin khusaysa soo afjarida burcad badeednimada Somalia Views: 14995
Jacayalku waxaa uu u qaybsamaa Sadex qaybood Views: 13069
Taariikhdii Xaaji Diiriye Allah Ha u naxariistee Views: 12600
Sawiro Cusub oo naga soo gaaray Masjidka Xaarxaar Views: 9734
Tarriikhdii Carays Ciise Kaarshe Views: 9465
Tilmaan Gaaban baan awrtablow idin tusaaleyne, Gabay Views: 7846
Waa Book Cusub oo lamagac baxay Ahmed iyo Nasiib Views: 7253
Muwaadinka Koowaad, Guulayste, Mudane, Mohamed Abdi Yusuf Views: 6050
MUQDISHO DIYAAR UMA AHA IN SOOMAALI ISU SOO NOQOYTO 18.06.13
Xaflad Heer sare ah oo ay Jaaliyada reer Boston ku Taageereen curasha Jubaland(Daawo Sawirada) 02.06.13
Xalfad lagu taageerayo maamul gobaleedka Jubaland oo caawa Boston ka dhici doonta 01.06.13
Tahniyad Aroos: Mohamed Hersi iyo Ayan Kilimbe oo ku aqalgalay Magaalada Boston 26.05.13
Raisalwasaarihii KMG Mudane Maxamed Cabdi Yuusuf oo ka digay in la khaldo Dowlada somali marka laga hadlayo Arimaha Maamulka somaliland 09.04.13